Meetings & Events at Great Zimbabwe Hotel, Masvingo, Zimbabwe
Africa Southern Africa Zimbabwe Great Zimbabwe Hotel Key Highlights
Straddling its own grounds and the World Heritage Site is the Great Zimbabwe Hotel and Lodges, with the lodges within the site and, therefore, the subject of preservation orders. The Great Zimbabwe Hotel is made up of 38 neat rooms all with wall to wall carpeting. The Great Zimbabwe Hotel has one c...
Straddling its own grounds and the World Heritage Site is the Great Zimbabwe Hotel and Lodges, with the lodges within the site and, therefore, the subject of preservation orders. The Great Zimbabwe Hotel is made up of 38 neat rooms all with wall to wall carpeting. The Great Zimbabwe Hotel has one conference room with a maximum capacity of 100 people.
Madzimbabwe Conference Room
World Heritage SiteMasvingo, Zimbabwe Map Venue